Obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona na ị ga-achọpụta | Njem zuru oke
Ọ bụ eziokwu na Barcelona bụ otu n'ime ebe ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya. Ikekwe ọ bụ ya mere ihe niile obodo mara mma na nso Barcelona ekpuchiwo. Ebe ọ bụ na anyị anaghị achọpụta mgbe niile na enwere akụ zoro ezo ebe anyị na-atụghị anya ya na taa, anyị na-enyocha ha niile.
Gburugburu Barcelona, anyị ga-ezute ọtụtụ obodo ndị kwesịrị ịmara, ọ bụrụ na ịmebeghị ya. Ọ bụrụ na ị ka nwere ụbọchị ụfọdụ n'efu, ị nwere ike ịmalite ide aha nke ọ bụla n'ime obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona anyị kpọtụrụ aha wee pụọ. Ọ ga-aba ya!
1 Obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona, ​​Santa Coloma de Cervelló
2 Sitges, obodo ọzọ mara mma dị nso na Barcelona
3 Rupit m Pruit
5 Caldas de Montbui
Obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona, ​​Santa Coloma de Cervelló
Ọ dị na mpaghara Bajo Llobregat. N'ihi ya, ọ dị nso na Barcelona, ​​ihe dị ka kilomita 18 site na obodo ahụ. Ya mere ọ bụrụ n’ịga ụgbọ oloko, n’ime ọkara otu awa ị ga-anọ ebe ị na-aga. Ozugbo e ị pụrụ ịnụ ụtọ ya akụkọ ihe mere eme na etiti na-ahụ Banalọ Salbana malitere na narị afọ nke iri na nke iri na otu. N’agaghị echefu Crypt nke Colonia Güell nke bụ ọrụ nke Antoni Gaudí. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX dị ka ụlọ okpukpe. Obodo ochie ya ebe ị ga-ahụ ndị agbata obi Can Lluch na Plà de les Vinyes.
Sitges, obodo ọzọ mara mma dị nso na Barcelona
Ọzọkwa ọkara ọkara awa site na Barcelona anyị ga-ezute Sitges. Na mpaghara a anyị ga - achọta Palacio de Maricel, yana Chọọchị San Bartolomé na Santa Tecla E wuru ya na narị afọ nke iri na asaa, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ gbanwere ọtụtụ mgbanwe. Anyi echefughikwa ulo oru nke La Trinidad, nke bu ihe owuwu ama ma buru akuku nke ihe nketa nke Catalonia. Ije ije site na ebe a, site na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya na osimiri ya, dị mkpa.
Rupit m Pruit
Ọ dị na obodo Osona ma mejuo etiti abụọ dị Rupit na Mkpụrụ. Ekwesiri ikwu na rue mgbe njedebe nke 70s onye ọ bụla n’ime ha nwere onwe ya. Ọ bụrụ na enwere ihe anyị hụrụ n'anya banyere ebe a, ọ bụ na ọ ruru anyị n'oge ọzọ. Ọ na-edonye anyị kpọmkwem n'ime oge, mgbe anyị na-achọta okporo ámá ndị wara wara na ụlọ ndị e ji nkume wuo nke ọma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ụka na ndị Romanesque niile dịka San Lorenzo Dosmunts ma ọ bụ San Miguel de Rupit.
Ọ bụ ezie na ọ pere mpe, mana ọ ka nwere aka ochie mana anyị matakwara ya. Ọ dị nke ukwuu nso Terrassa. O nwekwara okporo ámá kpakpando na okwute, nke na-enye ya ikuku ikuku. O nwere ụka San Martín nke bidoro na narị afọ nke XNUMX. Ebe ngosipụta nke nwere ezigbo ihe eji eme ihe nke na-agbakwunye mma ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
N'ógbè Barcelona, ​​na mpaghara Vallés Oriental, anyị na-ahụ Caldas de Montbui. Ihe ma ọ bụ ihe na-erughị ihe dị ka kilomita 35 site na obodo Barcelona, ​​n'ihi ya, ọ bụ ihe ọzọ dị n'akụkụ ndị dị nso nwere ịma mma dị ịtụnanya. Dika ihe omuma di omimi, ekwesiri ikwu na mmiri nke si n'uwa puta nwere oke oku di elu. Ihe ndị Rome jirila mee spa. Ebe ị ga-ahụ kacha mma na-ekpo ọkụ mmiri echebe site na Spain.
Na mpaghara Bages anyị hụrụ Cardona. Na ya kasị elu, ị ga-enwe a nnukwu ụlọ na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme kemgbe ọ e wuru na 886, na ụdị ịhụnanya na nke gothic. O nwere ụlọ elu nke narị afọ nke iri na itoolu ma taa ụlọ a aghọwo Parador Nacional. Chọọchị San Miguel ma ọ bụ Chọọchị Collegiate nke San Vicente de Cardona bụ isi okwu ndị ọzọ nke ebe a. Ugwu nnu na ebe ahịa bụ ihe ọzọ ị na-agaghị echezọ.
Na Mpaghara Osona, anyị na-ahụ Tavertet, obodo ọzọ mara mma nke dịdebere Barcelona. N'okwu a, echiche ndị ọ nwere ike ịnye anyị kachasị ịtụnanya. Ebe ọ bụ na ọ dị n’elu elu okwute. A na-ewere ụlọ ya ndị e ji okwute mee, nke nwere ọdịnala ọdịnala ya na obodo ndị mepere emepe dị ka Akụ nke Mmasị Omenala.
Na mpaghara Bajo Llobregat, anyị hụrụ Abrera. N'ime ya ị ga-anụ ụtọ oke nketa dịka theka San Pedro site na narị afọ nke iri na otu ma ọ bụ Nkume nke San Hilario, tupu Romanesque. Enwekwara Castle nke Voltrera, mana na nke a anyị ga-ahụ ya na mkpọmkpọ ebe, n'agbanyeghị na ọ na-ejigide akụkụ nke ụka Romanesque. N'ezie, na Tuesday ọ bụla enwere ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ngwaahịa mpaghara.
Girona bụ ebe ọzọ anyị ga-akwụsị. Ọ bụ ihe ọzọ na isi ihe ndị ekwupụtala dịka ọgbaghara nka. Ebe ọ bụ na ọ nwere ochie ije na ọ bụ ezigbo mma ichebe. N’otu akụkụ ị ga-ahụ ụlọ ya nke malitere na narị afọ nke X-XI. Ná mmalite nke narị afọ nke XNUMX na Chọọchị nke Sant Esteve. Mgbe Obí nke Peratallada bidoro na narị afọ nke iri na anọ. Dịka anyị pụrụ ịhụ, ha niile bụ isi okwu dị nso mana oge ụfọdụ ha na-anọ n'azụ. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona, ​​ị gaghị echefu ndị ọ bụla a kpọtụrụ aha. Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ha, ha ga-alaghachikwute gị n'oge ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona
Ebe 6 dị mkpa iji gaa Fuerteventura
Ebe egwuregwu kacha mma na Andorra na Spain